Ngenisa amatafula ukusuka kwi-Excel ukuya ku-AutoCAD okanye kwi-Microstation-Geofumadas
Meyi, 2008 AutoCAD-AutoDesk, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Andiyithandi ukungenisa i-data yeh, yileyo sithethateas; Mna ngoku ukuthetha ngokungenisa Iseli itafile olupheleleyo Ukuseta ukubhala, ufake imifanekiso kunye neempawu Excel, kunye zibe amagqabi ezahlukeneyo kwaye ngaxeshanye ukwazi uphuculo zombini iindlela.
Ngaphambili, ukwenza amatafula ku-AutoCAD, izinto ezilula ze vector, imigca kunye neetekisi ezifanayo; ukuhlushwa kuthi sonke sihlupheke ngakumbi kunanini ngaphambili, kwi-2005 version AutoCAD idibanise amandla okusebenzisa amatafula ashukumisayo.
Ukusetyenziswa kwezi qhelo ngokuqhelekileyo kubakho kwizintlu zabanikazi beemephu, iifom zokwenza izicwangciso zecandelo, uluhlu lwezinto okanye iinkcukacha kwizicwangciso ezifuna iitafile ngeenkcukacha ezininzi. Ubuncedo bokukwazi ukwenza oku kwi-Excel kwaye ukuyigcina ihlaziywa ukusuka kubaluleka kakhulu.
Ndifuna ukukubonisa I-AutoTable, isixhobo esingasebenzi kunye kuphela AutoCAD ukusuka kwinguqulo ye2000 ukuya ku-2008, kodwa ikhona kwakhona MicroStation V8.0 okanye ngaphezulu, Bricscad, ProgeCAD y COPopia. Ukubona ukuba umsebenzi uyandikhumbuza xa uLotus 123 isebenzise iWYSIWYG yayo ngaphambi kokuba ifike kwi-Excel, i-AutoTable ikhuthaza "Yintoni oyibonayo kwi-Excel yinto oyifumana kwi-CAD".
Makhe sibone iimpawu zayo:
Ekubeni i-AutoCAD isele yenza oko, kuya kuba lunomdla ukwazi ukuba i-AutoTable yenza ntoni ukuba i-AutoCAD 2008 ayenzi:
1 I-AutoTable isebenza ngokukhawuleza
Amaqhosha asele anziwe ngawo, ngoko kungeniswa kwangoko; ingahlaziywa ukusuka kwi-Excel ukuya kwi-AutoCAD okanye ngokulandelana. Kwakhona "uhlaziyo" lukhawuleza kwaye ulawulo lweendlela ezihambelanayo lusebenza bhetele, njengoko kunjalo xa idatha igcinwa ngaphakathi kwe-intranet.
2 I-AutoTable ivumela ukhetho lokungenisa amanani
Akukuphela kuphela itafile ezayo, ukuba ukhetha ukungenisa kuphela uluhlu lweeseli kwaye ezi zinto zingenziwa kwiifayile ezahlukeneyo zefayile efanayo ye-Excel.
3 I-AutoTable igcina ulawulo olungcono
Ungachaza ukhetho olukhoyo ngaphandle kweemida ... ah, lusekela zonke iintlobo zemigca efana nemigca ephindwe kabini, edibeneyo okanye ediagonal.
Unokulawula kwakhona iimpawu zeeseli ezifana nombala ogcwalisiweyo, umbala womda, uhlobo lobhaliweyo, ubungakanani njl. yileta ngaphakathi kwiseli enye. Oku akwenzi kakuhle kakhulu i-AutoCAD, ndicinga ukuba kuxabiseke ukuba unokuqwalasela iibalo zeetafile (unicode) kwaye unokwesekela izibonakaliso zemathematika.
Xa oku kwenziwa AutoCAD 2008 yonke into iza iimpawu ngokulinganayo, bakwazi ukunika abanye abalinganiswa akakwazi ukulawula ububanzi ngqo kwiikholam okanye imiqolo ubude.
... unokukhetha nokucwangciswa apho ungenisa khona umxholo wetafile kunye nomlinganiselo ofuna ukungenisa kuwo.
4 Izisa yonke into!
Ukuba kukho imilo ebalulekileyo etafileni (amanani akwenziwe kwi-Excel) ayaziswa kwaye asimangele ... imifanekiso kunye neemifanekiso ezifakwe kwitafile nazo ziziswa.
5 Njengokuba kwakukho i-Excel
Ukuguqula isicatshulwa ngaphakathi kwetafile, unokwenza "i-F2", ngokungathi sise-Excel. Ungakwazi ukungenisa izicwangciso ezihlukeneyo zee-worksheet kwiifayile ezifanayo ze-Excel.
Ndicinga ukuba sisixhobo pretty lokuposa kwaye ukuphucula imveliso, amaxabiso kuye ngo yinguqulelo AutoCAD, Microstation okanye IntelliCAD kwaye ungayisebenzisa njengendlela mvume engenasigxina ... oko kukuthi, akukho umatshini enye wabelwa kodwa ayikwazi efakwe kwiseva kwaye isetyenziswe ngabasebenzisi ezahlukeneyo.
Ndicinga ukuba inkampani, ukuba ityala imali engaphezu kwe-$ 3,000 kwi-AutoCAD, ayiyi kuba nengxaki yokuyiqwalasela ukuba iya kuwusebenzisa. Ngaloo nto, ilayisenisi ye-AutoCAD LT ibiza i-$ 149, kunye nesaphulelo xa ngaphezulu kuthengwe enye.
Nantsi unxibelelwano I-AutoTable, unako khuphela kwimiqulu yezilingo ngeentsuku ze-30.
Post edlulileyo«Edlulileyo Iimpawu ze-7, phantse yonke into ibuyele eqhelekileyo
Post Next Ukuqhaqhaza uqalise iGeXH, kunye nokuchaneka kwe-meter ngexesha langempelaOkulandelayo "
Iimpendulo ze-2 "Ukungenisa iTables ukusuka kwi-Excel ukuya kwi-AutoCAD okanye kwi-Microstation"
Ndingayifaka njani iithebula ze-Excel kwi-MicroStation SE okanye iJ, kuba ndinelo hlobo lelayisenisi kuphela.
jose william uthi:
le nkqubo ibonakala iyasebenza, nayo yinto engcono kakhulu eyenziwe yi-autocad, kuba umyalelo wetafula we-autocad unengxaki ezininzi kwaye i-autodesk ayikwazanga ukuyixazulula.